Ziziphi iindlela zokufumana i-backlink ngo-2019?
Izicelo zoqhagamshelwano zihlala enye yezindlela ezidumileyo zokufumana i juyisi kwi-domain kunye nokuphucula i-website. Ngokuncediswa kwezicelo zekhonkco, unokwakha izixhumanisi zangaphandle ngokusebenzisa umxholo okwangoku kwisayithi yakho. Ukubuyela emva kweyona ndlela yindlela efanelekileyo yokwakha i-brand yakho kunye nokuphucula ulwazi lwayo. Ingxaki kuphela kukuba abaninzi bewebhsayithi banendlela engafanelekanga yokudibanisa isakhiwo. Bayakulibala ukubandakanya ezinye iiwebhusayithi ngaphandle kwazo, ukuzenza ngokwezifiso nokuba kutheni oku kuya kunceda umnini wewebhu.
Kule nqaku, uza kufumana iindlela zokusebenzisa izicelo zekhonkco ukuphucula umkhankaso wokwakha ikhonkco. Kukho ezinye iindidi ezininzi zeekhonkco zezicelo ze-backlink ngaphandle kwale nto uya kuzifumana kweli nqaku.
Indlela yokufumana i-backlink ngo-2019?
I-Ont yexesha elibalulekileyo omele uliqwalasele xa ufikelela kwiwebhusayithi; kufuneka ulungele i-imeyile ukuze ihambelane nesayithi. Qinisekisa ukuba ii-imeyile zakho zizodwa kwaye zibandakanya ulwazi oluya kuxabiswa kakhulu ngumfundi. Kufuneka ubenze ngqo kwisihloko sewebhusayithi kwaye ubonise iqabane lakho loshishino olibandakanya ngumxholo obekwe kumthombo wewebhu. Imizuzu emininzi eyongezelelweyo ethathayo ingenza umehluko omkhulu kwiimpendulo kunye newebhsayithi ezinokuthi ziyakunika impendulo efanelekileyo kwisicelo sakho. Kufuneka ugcine le ngcaciso engqondweni nasiphi na ixesha uzama ukuseka ubudlelwane bezoshishino kunye nomnini wewebhu.
Cela isicelo sekhonkco
Indlela echanekileyo yokwakha izixhumanisi kwi-domain yakho isicelo ngokuthe ngqo. Nangona kunjalo, le ndlela ingaphantsi kunezinye. Kuthatha imizuzu embalwa ukudibanisa ne-webmaster kwaye ubuze i-backlink. Isiphumo saloo mcimbi singahluka kwizinga lomthombo ofuna ukusebenzisana nalo. Amanqaku asemagunyeni awaziwa kakhulu aya kukwamkela isiphakamiso sakho njengoko sele ekhethwe ngokugqithiseleyo kwimithombo yewebhu abangakwazi ukushicilela okuqukethwe kumaphepha abo.
Ukukhangela imiba kwiingxaki zewebhu zangoku
Enye indlela ehlakaniphile yokufumana i-backlink esemgangathweni kwisiza sakho kukuskena umthombo web kunye nokukhankanya iimpazamo ezithile izisombululo kubo. Le ngcaciso inokuzisa ixabiso kumnini wewebhusayithi njengoko unceda ukuxazulula imiba abangenayo. Ukuba usebenzisa lolu hlobo lwesicelo sekhonkco, qiniseka ukuba unikezela i-webmaster kule datha mahhala. Kukulungele ukulinda de idilesi yesibini okanye yesithathu yokuxhumana phambi kokuba wenze isicelo se-backlink.
Ukusebenzisa umxholo wakho njengomthombo womxholo owamfumene
Le ndlela yokufumana i-backlink inganceda isayithi lakho. Ukuba ubhekisela kumnini weblogi kwaye ubeke izimvo malunga neli nqaku okanye okuposayo ufuna i-backlink ukusuka kuyo, yintetho encoko. Enye indlela yokufumana i-backlink ukukhankanya iposi owalifumanayo, kwaye ukhupha isithuba ofuna ikhonkco. Kufuneka ufunde amanqaku kwaye ubone iindawo apho ukhankanywe khona umqondiso uya kuba neengqiqo kwaye ujonge imvelo. Ukuba akanayo ikhonkco okwangoku, bonisa ukuba iwebhusayithi yakho ingaba ngumthombo ontle wale khowudi Source .